Nagu saabsan - Shijiazhuang Teneng Korontada & Qalabka Farsamada Co., Ltd.
Shijiazhuang Teneng Qalabka Korontada & Farsamada Co., Ltd.
Shijiazhuang Teneng Korontada & Qalabka Farsamada Co., Ltd waa soo-saaraha xirfadda leh ee soo-saarka biibiilaha birta alxanka, khadadka duudduuban sameynta, xarriiqda, xariiqa-ilaa dhererka iyo qalabka kaabayaasha ah ee la xiriira. Shirkadda Teneng waa shirkad casri ah oo awood u leh cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Teneng waa xubin golaha ah ee Ururka Samaynta Roll China, xubin madaxweyne ka ah Ururka Ganacsiga Tube Hebei Steel.
Mashiinnada Teneng waa qalabka wax -soo -saarka tuubada ugu waxtarka badan ee laga heli karo adduunka. Dalka Shiinaha, adeegsadayaasha caanka ah waa Hebei Jingye Group, SANY Group, Shirkadda Warshadaha Dhismaha Shiinaha, Chongqing Changzheng Heavy Industry Co., Ltd iwm.
Mashiinnada Teneng ayaa ka shaqeeya dalal kale oo badan oo aan ahayn Shiinaha, sida
Ameerika, Portugal, Venezuela, Brazil, Paraguay, Russia, Ukraine, Japan, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, India, iwm. Teneng wuxuu ka helay macaamiisheena adduunka ammaanno caalami ah oo ay ka heleen badeecad tayo sare leh iyo adeeg iib kadib kaamil ah.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkadda Teneng waxay siisaa macaamiisha boqollaal khadadka wax -soo -saarka, waxaan leenahay khibrad farsamo oo aad u badan. Iyada oo ay hagayaan khubarada gudaha iyo macalimiinta, Teneng wuxuu la socdaa dhaqdhaqaaqyada tikniyoolajiyadda horumarsan ee shisheeye, nuugista, hal -abuurka iyo kobcinta sameynta qabow dabacsan ee tikniyoolajiyadda. Qalabka Teneng ee loo isticmaalo tuubada API, baabuurta, dhuumaha dhismaha, tuubooyinka alaabta guriga, soo saaridda weelka, darbiyada xayndaabka, qalabka isboortiga iyo wixii la mid ah.
Baahida macmiilku waa xoogga hormarinta teknolojiyadda, xoogga shirkadeed ee xooggan waa taageerada kor u qaadista farsamada. Shirkadda Teneng waxay la kaashan doontaa soosaarayaasha gudaha iyo dibaddaba si ay u siiyaan qalabka tayada sare leh, tikniyoolajiyadda xirfadda leh, adeegga ku habboon macaamiisha.
Awoodda Wax -soo -saarka & Nidaamka Adeegga:
Shirkadda Teneng waxay leedahay malaayiin mitir oo laba jibbaaran oo warshad ah, sidoo kale waxay leedahay nidaam isuduwe oo xoog leh oo leh alxanka iyo soosaarka caaryada. Qaybaha caadiga ah ee qalabka waxaa la xushay badeecad ganacsi oo si fiican loo yaqaan, wax-soo-saarka la xoojiyay iyo nolosha adeegga. Laga soo bilaabo habka qaybinta ilaa isku -dubaridka mashiinka, waxaan samaynaa jeegag dhammaan heerarka, waxaanan wadnaa nidaamka mas'uuliyadda wax -soo -saarka. Adeegga shakhsi ahaaneed ka dib ayaa tababar laga qaadanayaa ku -dhaqanka, oo ku hawlan hawsha qalabka sanado badan, si loo xalliyo dhibaatooyinka kala duwan ee ku -dhaqanka wax -soo -saarka, rakibidda qalabka hagidda iyo shaqaalaha tababarka macaamiisha.
Awood farsamo oo xoog leh iyo nidaam adeeg oo kaamil ah ayaa ah rukunka Teneng.
Teneng waxay leeyihiin 15 injineero naqshadeyn iyo 20 injineer komishan, dhammaantood waxay leeyihiin wax ka badan 15 sano oo waayo -aragnimo ah warshadaha dhagax -tuubka. Shaqaalaha Teneng waxay had iyo jeer ku socdaan geeska ugu horreeya ee teknolojiyadda, iyagoo la socda horumarradii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda dhagax -tuurka, gudaha suuqa iyo is -beddelka baahida macmiilka, waxay ku sameeyaan hal -abuurnimo teknolojiyadda horumarsan ee loo adeegsado badeecadaha.